UBRANDI GLANVILLE SLAMS UCAMILLE GRAMMER KWI-TWITTER - IINDABA
Ngomhla kaSeptemba 8, 2021 nge-tweet, ababekade bengabafazi boqobo beBeverly Hills inkwenkwezi uBrandi Glanville waya kuCamille Grammer ngenkangeleko yakhe kuWatch What Happens Live. Ngexesha lokujonga kukaGrammer, wayenayo i-canine yakhe kwiscreen kunye naye, uGranville engakhange abonakale ethanda kakhulu.
Umm Ngaba yeyona ndlela ilungileyo @TheRealCamilleG uyiphulula i-canine ixhomekeke ekuthandeni uburhalarhume! UGranville wabhala . Ngenxa yokuba ndingonwabanga.
Ummmm Ngaba yeyona ndlela ilungileyo @NtsikeleloCanga Ukubetha i-canine yakhe kuxhomekeke ekulweni nesilwanyana! Ngenxa yokuba ndingonwabanga
-Brandi Glanville (@BrandiGlanville) NgoSeptemba 9, 2021
Kamva ngobo busuku, uGlanville waphendula kumlandeli owayedidekile ukuba kutheni ebhale loo nto kuTwitter. Ndikhathalela izilwanyana, iGlanville ubhale . Kwaye, kubonakala ngathi kufana nokokugqibela ukubamba iliso leGrammer, obhale waphendula ukuya eGlanville, kunye neekati ezixhaphaxhaka….
Ababukeli banokubamba zonke iziqendu ezitsha zooMama abaNene beNdlu yaseBeverly Hills rhoqo ngokuhlwa ngoLwesithathu ngentsimbi yesi-8. Ixesha leMpuma kwiBravo.
IGlanville ihambile emva kokuGrama kwi-Twitter ngaphambili
@NtsikeleloCanga ukuba bendihlala ndisebenzisa okwenzekileyo phakathi kweDenise & I 2 buyela i-2 BH ngekhe ndiyenze ixesha lokugqibela xa isenzeka & bendikade ndenza iifilimu zokuvuma izono okanye ekuqaleni kweli xesha lonyaka. Be4 Nawuphi na umntu ebesazi ukuba usisidenge iesile uyadika ukubaleka ukungasebenzi kakuhle
-Brandi Glanville (@BrandiGlanville) NgoSeptemba 21, 2020
Eli ayiloxesha lokuqala lokuba iGranville iye kwiGramer kwi-Twitter. Ngo-Septemba ngo-2020, xa ixesha le-10 laBasetyhini boMama bokwenyani beBeverly Hills babedlala, UGranville wabhala kwiGrama, @TheRealCamilleG ukuba bendikhe ndisebenzise okwenzekileyo phakathi kweDenise & I 2 buyela 2 BH ngekhe ndiyenze ixesha lokugqibela xa isenzeka kwaye bendikade ndenza imiboniso bhanyabhanya yokuvuma izono okanye ekuqaleni kwesizini. Bendihlala ndiphinde ndaqeshwa ngaphambilana NOMNTU ebesazi ukuba usisidenge a ** bored f ****** twat engasebenziyo.
Komnye umyalezo Kwangolo suku lunye, uGlanville wamkela, Enye into @TheRealCamilleG phuma ku-Twitter kwaye uye kunyusa abantwana bakho okanye uthambise unyango lweprostate yomyeni wakho. Kungcono kodwa uchithe ezimbalwa kwi-alimony yakho ongayifumenanga njengenye indlela yokwenza iinzame zokutshabalalisa amantombazana achaseneyo kumdlalo. Unobukrakra c ***. Ndihambile ukuya kunceda unyana wam ukulungiselela isheke.
IGlanville 'Yaphoxeka' Ukuba ayibuzwanga emva kwiXesha le-11 leRHOBH
Ngexesha lodliwanondlebe lowama-2021 ku-Epreli no-Entertainment Tonight, uGlanville uvumile ukuba akanelisekanga kukuba akazange acelwe ukuba ajonge ixesha le-11 le-The Real Housewives of Beverly Hills. IGlanville ibonakale ingenasiphelo kulo lonke ixesha le-10 ukukhupha umdlalo weDenise Richards, nangona kunjalo khange iphangwe njengosisi wasekhaya osemthethweni.
Bendihlala ndingonelisekanga, inyani, ngenxa yokuba ndizive ngathi ndibanikile ixesha labo, iGlanville ityhilekile kwindawo ephumayo. Baye basebenzisa amatyeli ambalwa endiye ndadubula kuwo, ngaphakathi kwetreyila nakwimizi-mveliso nganye. Andizange ndenze imali eninzi. Ngokwenyani ndicinge ukuba kunokwenzeka bazakundibuza ukuba ndibuye kwakhona, ngenxa yoko ndenze okuninzi ngeli xesha lonyaka, kwaye bekuyikhilikithi. Akukho mntu ufikileyo kum. Akukho mntu uthi 'ngokuqinisekileyo' okanye 'hayi.' Ndingahle ndicinge ukuba ndingafumana igama leselfowuni kwaye bendifana nokuthi, 'Mamela, siza kuhamba enye indlela, nangona kunjalo enkosi ...' kuye nabani na.
I-Glanville iyaqhubeka, ndaziva ndikhetha nje ukuba yayi luhlobo lokonwaba. Ndibe neencoko ngaphambi kokuza kwakhona, [noAndy Cohen] kwaye bendinayo. Unje, 'Mhlawumbi emva kokuba [uLisa Vanderpump] emkile, kwaye siza kujonga kuloo nto. ukugalela ityuwa emanxebeni akhe. ’Kwaye ndinje, andizenzi zombini, kodwa ndinqwenela umsebenzi.
okokugqibela kunye nexesha lesi-4
UFranklin saint esekwe kwi
UDavid okhululekileyo we-2019
Amber portwood indlu entsha
iminyaka emitsha eve countdown central time